रूखो छु, र त सही छु
सम्झना घिमिरे काठमाडौं, ३ जेठ
डा. तिलक रावल नेपालका एघारौँ गभर्नर हुन् । उनले ४ माघ २०५६ देखि १२ भदौ २०५७ सालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा रहेर काम गरे । राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक बनाउने प्रक्रियामा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सोही कारण पनि उनको कार्यकाल राम्रै भएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
गभर्नर भइसकेका व्यक्ति पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोडिनु न्यायसङ्गत नभएको बताउने रावल गभर्नरबाट अवकास पाएको ६-७ महिनामै शैक्षिक क्षेत्रमा लागे । काठमाडौंको मध्यबानेश्वरस्थित ‘ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट’मा लामो समय प्राचार्यको जिम्मेवारी सम्हालेका रावल पूर्वसभासदसमेत हुन् ।
शिलापत्रडटकमले नियमित स्तम्भका रूपमा केही स्तम्भहरू सुरु गरेको छ । तीमध्ये मेरा कमजोरी एक हो । मेरा कमजोरी स्तम्भमा विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरूका आफ्ना कमजोरी उनीहरूकै मुखबाट प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जमर्को हो । यस पटक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलका कमजोरीहरूलाई उनकै मुखबाट प्रस्तुत गराउने प्रयास गरेका छौँ ।
तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, देशकै मर्यादित अनि सम्मानित पदमा रहिसकेका व्यक्तिका पनि केही नराम्रा बानी अथवा केही कमजोरीहरू हुन सक्लान् र ?
पक्कै पनि डा. रावलका पनि सम्झनयोग्य केही कमजोरीहरू छन् । नराम्रा बानीहरू पनि छन्, जसलाई सुधार गर्दै र परिवर्तन हुँदै उनी आज यो ओहोदासम्म आइपुगेका छन् ।
चित्त नबुझेको कुरामा रूखो शैलीमा प्रतिक्रिया दिने
वास्तवमा रावल फरासिला र सटिक उत्तर दिने स्वभावका छन् । उनी सही लागेको कुरामा तारिफ गर्न पछि पर्दैनन् भने चित्त नबुझेको कुरामा तुरुन्तै प्रतिक्रिया पनि जनाइहाल्छन् । कहिले नम्र भएर त कहिले रूखो शैलीमा । प्राय: चित्त नबुझेको कुरामा प्रतिक्रिया जनाउँदा ठूलो स्वर र रूखो शैली हुन्छ उनको ।
‘कहिलेकाहीँ झडङ्ग बोल्ने बानी छ । बोलिहाल्छु । पछि विस्तारै नम्र भएर बोलेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ । कहिलेकाहीँ आत्मग्लानि पनि हुन्छ तर फेरी सोच्छु- सत्य बोल्न चित्त नबुझेको कुरा भन्दा रूखो बोलेजस्तो भए पनि त्यही नै सही हुन्छ', थोरै मुस्कुराउँदै बोल्ने उनी भन्छन्, 'मनमा कुरा राखेर बाहिर नम्र हुन खोज्दा धेरै दिनसम्म कुरा मनमा रहिरन्छ । यसले नकारात्मक गतिविधितर्फ उन्मुख गराउँछ । त्यही भएर प्राय: म रूखो शैलीमा नै प्रस्तुत हुन्छु ।'
यति भनिसकेपछि भने उनी विगतमा भएको कमजोरीहरू सम्झन थाल्छन् । उमेरले ५ दशक पार गरिसकेका डा. रावल किशोर अवस्थामा भएको नराम्रो बानी सम्झन्छन् ।
किशोर अवस्थामा लुकीलुकी खान्थे चुरोट र वियर
१५-१६ वर्षको उमेरमा साथीभाइको लहैलहैमा लागेर चुरोट र रक्सी पनि खाने गरेको सम्झिन्छन् डा. रावल ।
अनि हाँस्दै भन्छन्, 'त्यतिखेरको उमेरै त्यस्तो हुँदो रहेछ । कहिलेकाहीँ साथीभाइसँग रामाइलो गर्दा होस् या पिकनिकमा परिवारबाट लुकीलुकी चुरोट र रक्सी पनि खान्थेँ । तर, खाए पनि मनमा भने तँ विद्यार्थी होस्, यो गलत गरिरा' छस् भन्ने लागिरहन्थ्यो । सायद पछि त्यहि भावानाले पनि चुरोट र रक्सी खान छाडेँ ।'
उमेरमा परिवर्तनसँगै स्वभाव पनि परिवर्तन हुँदै जाने र यसलाई ठूलो मान्न नहुने उनी बताउँछन् ।
पञ्चदेखि न्यायधीशसम्मको परिवारमा हुर्केका उनी बाल्यावस्था, किशोरावस्थामा यस्ता नराम्रा बनी बसे पनि परिवारले र संस्कारले भविष्य बिग्रन दिँदैन भन्छन् । उनी भन्छन्, 'मेरा छोरा वा छोरी बिग्रिए भनेर या उसको कुनै गल्तीलाई बारबार नदोहोर्‍याउनुहोस् । बरु सही बाटोमा ल्याउन सम्झाउने या फकाउने गर्नुहोस् यसले गलत बाटोमा उन्मुख सन्तानलाई पनि सही दिशामा ल्याउन सकिन्छ ।'
सम्झौता नै जीवन हो
अहिले आमनेपाली घरभित्र थुनिएर बस्नुपरेको छ । डा. रावललाई पनि निकै सकसपूर्ण नै छ यो अवधि । तर, उनले यो सकसपूर्ण अवधिलाई सिर्जनशील समयको रूपमा सदुपयोग गरिरहेका छन् ।
'कसलाई मन हुन्छ र घरमै बसिरहन ! ५० दिन भइसक्यो घरभित्रै बसेको । बाहिर घुम्न, खान मन्दिरसम्म जान रहर त लाग्छ तर जान मिल्दैन । यो पनि एक प्रकारको सम्झौता नै त हो नि ! सम्झौता तपाईं मैले मात्र नभएर अहिले समग्र विश्वले नै गरिरहेको छ', उनी भन्छन् ।
रावल थप्छन्, 'त्यही सोचेर म यस समयमा पढ्न बाँकी किताब पढेर, आर्टिकल लेखेर, कहिले टीभी हेरेर त कहिले त्यही टीभीमा अन्तर्वार्ता दिएर दिन कटाइरहेका छौँ । मैले यो समयलाई सिर्जनशील बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसो गर्दा आफूलाई फुर्तिलो राख्न सहयोग हुन्छ भने सिर्जनशील पनि बनिन्छ ।'
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, १४:१०:००